Yaa libinta helaya haddii uu dagaal ganacsi dhexmaro Shiinaha iyo Mareykanka? - BBC News Somali
Marka la eego isu dheeli tirnaanta ganacsi ee hadda jirta, waxaa muuqanaya in Shiinuhu oo dakhligiisa lagu qiyaaso ku dhawaad 15 tiriliyoon oo doolar ay mustaqbalka dhow dhibaatada ugu ba'an ka soo gaari doonto murankan.
Shuang Ding, oo ah dhaqaaleyahan reer Shiina ah oo ka tirsan bangiga Standard Chartered isla markaana ka tirsanaan jiray hay'adda IMF ayaa sheegaya in ay muuqato in labadani waddan aysan kala maarmin dhaqaale ahaan.
"Ganacsi doqonnimo ah"
Qoraal caro xambaarsan oo uu Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in caqabadaha dhanka ganacsiga ah ee Mareykanka uu kala kulmayo Shiinaha ay tahay in la yareeyo, qaabka ganacsi ee hadda u dhaxeeya labadani waddanna uu yahay "mid doqonnimo ah".
Ding ayaa rumeysan in dowladda Shiinuha ay sidoo kale arkayso in wada xaajoodka ganacsi ee kala dhaxeeyo Mareykanka uu faa'iido u leeyahay dalkiisa oo heli doono maalgashi shisheeye oo aad u weyn.